कर्णाली सम्झाउने २२ घटना - नेपाल समय
कर्णाली रारा पर्यटन वर्षदेखि सुर्खेत बाढीपीडितलाई राहतसम्म आएर ०७५ साल बिदा भएको छ। यही अवधिमा राउटेले पहिलोपटक परिचयपत्र, सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको सर्वे, जुम्लाका डा. केसीको अनशन, कालिकोटको न्यौपाने बस्ती खरानी, मन्त्रीहरुले ढुङ्गा बोकेको विषय चर्चामा परे। यिनै घटनाको वरिपरिमा ०७५ साल सम्झना लायक छ। ०७५ सालले सुरु गरेका विकास निर्माणको बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने जिम्मा ७६ सालको काँधमा परेको छ।
वैशाख १ : ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कणाली प्रदेश सरकारले वैशाख १ गते ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ को औपचारिक उद्घाटन गर्‍यो। रारामै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्यटन वर्षको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए। ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ मनाइएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा २ लाख ३३ हजार २१ जना पर्यटक भित्रिएका छन्। ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्चेर उद्घाटन गरिएको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारामा ५ हजार ५ सय ३० जना पर्यटक पुगे। वैशाख १ गते नै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराबाट पहिलोपटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए।
वैशाख १० : पहिलो बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। नीति तथा कार्यत्रममा सुर्खेतदेखि बर्दियासम्म सुरुङ मार्ग, सुर्खेतममै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, उज्यालो कर्णाली अभियान, सीप तथा श्रम स्कुल खोल्ने लगायत महत्त्वकांक्षी योजना समेटिए।
वैशाख १८ : पहिलो अधिवेशन अन्त्य
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकियो। २२औं पटकसम्म बसेको प्रदेश सभाको अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्ने लगायत महत्त्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्‍यो।
जेठ ३ गते : जहाज दुर्घटना
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा दुर्घटना मकालु एयरको नाइन एन जेयु जहाँ दुर्घटनामा पर्‍यो। दर्घटनामा पाइलट किरण भट्टराई र कोपाइलट आदित्य नेपालको ज्यान गुमाए। जहाज सुर्खेतबाट हुम्ला कार्गो विमान लिएर गएको थियो।
जेठ ९ : पिए र सचिवबीच विवाद
गएको जेठ ९ मा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन नन्दसिंह बुढाका तत्कालीन पिए डम्बर बुढा र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विद्यानाथ झाबीच हात हालाहाल भएको थियो। कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका क्रममा मादक पदार्थको खर्च तिर्ने विषयमा भएको विवादपछि केही दिनमै झा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएका थिए।
जेठ १४ : कर्णाली प्रदेश सरकारको हनिमुन
कर्णाली प्रदेश सरकारको हनिमुन अर्थात् सय दिन पूरा भयो। तर द्रुत गतिमा दौडन संघीय कानुन बाधक बनेको निष्कर्ष निकाल्यो। भौतिक संरचना र विषयगत कर्मचारी अभावका कारण सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसेकको स्वीकार गर्‍यो। सय दिन अवधिसम्म कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष र डिजिटल प्रदेश निर्माणको गृहकार्यलाई आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
जेठ २४ : पहिलो पटक संसद् अवरुद्ध
सरकारको कामकारबाही र नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षले एकलौटी गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु पहिलोपटक संसद् अवरुद्ध पारेको थियो। दोस्रो अधिवेशनमा सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रीहरुको मनपरीविरुद्ध संसद्मा आपत्ति जनाउँदै संसद् अवरुद्ध पारिएको थियो।
असार १ : महत्त्वाकांक्षी र घाटा बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको थियो। विनियोजनमध्ये चालु तर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार ल्याएको थियो। बजेटमा डोल्पा र हुम्लाका जेष्ठ नागरिकलाई अनुदान, पर्यटन गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्न ६० करोड, दसवटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, सुत्केरी उद्धारका लागि १ करोड ५० लाख, छोरीबुहारीलाई प्राविधिक शिक्षा, ६ हजार युवालाई तालिम, राउटेलाई ५० लाख, संग्रहालयका लागि ४ करोडलगायतका विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको थियो। तर हाल बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ।
असार १६ : जुम्लामा डा. केसीको अनशन
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी पहिलोपटक जुम्लामा अनशन बसेका थिए। जुम्लामा एमबिबिएस अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने लगायत माग राखी अनशन बस्न पुगेका केसीलाई निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनशन अवधिभर जुम्लाका जनताले केसीलाई साथ दिए। साउन २ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा तोडफोड भयो। अनशन तोडाउन नसकेपछि सरकारले केसीलाई जबरजस्ती हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगेको थियो।
असार ३१ : राउटेलाई पहिलो पटक परिचयपत्र
जंगलका राजा भनेर चिनिने राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले स्थायी परिचयपत्र दिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सहज बनाउन र उनीहरुको संख्या एकिन गर्न परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। परिचयपत्र वितरणसँगै गुराँस गाउँपालिकाले राउटे रहेकै स्थानमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। राउटेहरु पश्चिम नेपालका अछाम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका छन्।
असार २० : जाजरकोटमा पहिरो
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ मा पहिरो जाँदा ९ जनाको ज्यान गएको थियो। पहिरोमा भेरी नगरपालिका–६ गंगटियाका खड्गबहादुर लुहार श्रीमती शीतला लुहार, छोरीहरु भावना, रञ्जना र मनीषा गुमाएका थिए। पहिरोले दुईवटा घर बगाएको थियो।
भदौ १५ : मन्त्रीहरुले ढुङ्गा बोकेको दिन
भदौ १५ मा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीहरुले वीरेन्द्रनगरस्थित खोर्केखोलामा पुगेर ढुङ्गा बोकेका थिए। श्रमको सम्मान गर्न सरकारले मनाउने गरेको श्रम दिनको अवसरमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायतले ढुङ्गा बोक्दा चर्चा नै चलेको थियो।
असोज २३ : दोस्रो पटक संसद् अवरुद्ध
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रातो किताब मागेपछि अवरुद्ध भएको थियो। बजेट विनियोजन भएको चार महिना पुग्दा पनि सरकारले रातो किताससम्म दिन नसकेको भन्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेका थिए।
असोज २५ : लेखा समितिद्वारा खर्च विवरण माग
कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले रारा पर्यटन वर्षमा भएको हिसाबकिताब र सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण मागेको थियो। समितिको चौथो बैठकले सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै खर्चको हिसाबकिताब माग गरेको हो। रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको खर्च १५ दिनभित्र भरपाई र बिल मागेको थियो।
कात्तिक १९ : डोल्पामा जीप दुर्घटना
तिहारको दोस्रो दिन डोल्पा जिल्लामा इतिहासमै पहिलो पटक ठूलो दुर्घटना भएको थियो। गाडी पुगेको सुखद खबर सेलाउन नपाउँदै दुःखद गाडी दुर्घटना भएको थियो। जिप दुर्घटनापछि त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका शोकमा डुबेको थियो। दुर्घटना गाडीचालक सहित ११ जनाको घटना मृत्यु भएको थियो।
कात्तिक २७ : सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको सर्वे
कर्णाली प्रदेशको मुख्य रणनीतिक मार्गका रूपमा लिइएको सुर्खेत–हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्य्राक) को चिनियाँ टोलीले सर्वे गरेको थियो। चिनको सिचुवाङ प्रान्तको सिआरसी रेलवे कम्पनीको टोलीले सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म हवाई सर्वे गरेको हो। चिनको सरकारी रेलवे कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि कवीन्द्र जोशी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही टोलीले हवाई सर्वे गर्न हिल्सा नाकामा पुगेका थिए।
पुस २ : गौरीकला हत्याकाण्डका दोषीलाई जन्मकैद
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सुर्खेत पञ्चपुरी–३ की गौरीकला रोकायका हत्यारालाई ३२ वर्ष जन्मकैदको फैसला भएको थियो। हत्यामा संलग्न सुर्खेत पञ्चपुरी–८ बाँझीगाउँका लक्ष्मी बास्तोला, खुमप्रसाद बास्तोला र दैलेखका हरिप्रसाद कोइरालालाई अदालतले जन्मकैद फैसला गरेको थियो। गौरीकलालाई एसईई परीक्षा केन्द्र बाबियाचौर नजिकै गत चैत १३ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। हाल दोषीहरुले जेलमा छन्।
पुस ९ : न्यौपाने बस्ती खरानी
कालिकोटको पलाता गाउँपालिका–१ को न्यौपानेवाडामा आगलागी भएको थियो। जहाँ ८३ वटा घर पूर्णरुपमा खरानी बने। घटनालगत्तै सरकारले पीडितको घर निर्माण र राहत दिने बताए पनि हालसम्म उनीहरुले सरकारले घोषणा गरेको राहत पाउन सकेका छैनन्।
फागुन ५ : खेलाडीको अपमान
कर्णाली प्रदेश सरकारले धुलोमा बसालेर अपमान गरेको थियो। प्रदेश मुख्यमन्त्री कप महिला तथा भलिबल प्रतियोगिताका विजेता, उपविजेता र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई अपमान गर्दै धुलोमा बसालेको हो।
फागुन ६ : हेलो किसान कार्यक्रम
किसानका समस्या सुन्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हेलो किसान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। निःशुल्क रुपमा मन्त्री, सचिव र विषय विशेषज्ञसँग गुनासा सुन्न टोलफ्री नम्बर १६६००८३५२०१२ व्यवस्था मिलाएको छ। सुरुवातको दिनमै वीरेन्द्रनगर–१० सानो सुर्खेतका मुरारीजंग शाहले मन्त्री विमला केसीलाई रोपाइँको निम्त्तो दिएका थिए।
चैत २२ : भेरी बबईमा चिनियाँ चमत्कार
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सकियो। नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग गरी सुरुङ सकिएको हो। सुरुङको वेशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेक थ्रु गर्ने कार्यक्रम छ। जुन आयोजनामा चिनियाँ चमत्कार देखिएको छ। कारण उक्त आयोजनाको निर्माण चिनिया कम्पनीले लिएको छ।
चैत २७ : बाढीपीडितलाई तीन लाख
वर्षौदेखि त्रिपालमा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् ४० औं बैठकले बाढीपीडितलाई आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। २०७१ सालमा आएको बाढीबाट सुर्खेतमा १ हजार ४५ जना घरबारविहीन भएका छन्। उनीहरु सबैले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले ३१ करोड ३५ लाख रकम पाउने भएका हुन्।